Maxaa lagu arkaa xeebta Talyaaniga | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa xeebta Talyaaniga
Talyaanigu waa mid ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee dalxiiska dad badan. Muuqaallada cajiibka ah iyo taariikhda kaliya lagama helo magaalooyinka waaweyn ee aan wada ognahay sida Rome ama Milan, laakiin sidoo kale waxay ku yaallaan xeebteeda ballaadhan. Xeebta Talyaanigu waa meel aad ka heli karto magaalooyin yar yar oo midabo badan leh illaa meelo raaxo leh iyo aagagga dabiiciga ee aadka u quruxda badan.
Aan aragno qaar Meelaha loo maro xeebaha Talyaaniga ee ay tahay inaad tixgeliso marka aad qorshayn karto fasaxaaga xiga. Xeebtaan waxaan ka heli doonnaa jasiirado iyo qaar ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka. Xusuusnow dhammaan meelaha aad ugu safri karto xeebta Talyaaniga.
2 Xeebta Amalfi
La Gobolka Cinque Terre ee xeebta Talyaaniga Waxay ka mid tahay kuwa caan ka noqday magaalooyinkeeda quruxda badan. Waxay leedahay soo jiidasho badan tan iyo sagaashameeyadii waxay ka mid ahayd Goobaha Dhaxalka Adduunka. Aaggan xeebta ah waxaan ku arki karnaa tuulooyinka quruxda badan ee Corniglia, Vernazza, Monterrosso al Mare, Manarola iyo Riomaggiore. Mid waliba wuxuu leeyahay soojiidasho ka duwan mararka qaarna waxaan heli karnaa socod lug ah oo isku xira tuulooyinka, sida wadada Via dell 'Amore ee isku xirta Riomaggiore iyo Manarola. Gudaha Monterrosso al Mare waxaad ku dhex mari kartaa jidadka cidhiidhiga ah waxaadna kor ugu kici kartaa aragtida. Magaalada Corniglia waxaad ka heli doontaa kaniisada San Pietro, qaabka Genoese Gothic, oo ah magaalada kaliya ee aan marin u lahayn badda. Kuwa kale waxaad raaci kartaa doon si aad u sahamiso waddadan yar ee xeebta ku taal.
Aaggan xeebta ku yaal Talyaaniga ayaa sidoo kale caan ku ah inay leedahay goobo qurux badan. Mid ka mid ah magaalooyinka la booqdo ayaa si hufan u ah Amalfi, oo ku taal sagxadda Monte Cerreto. Magaaladaan waxay leedahay quruxda badan ee Piazza del Duomo, barxadeeda weyn, oo leh Duomo iyo Fontana de San Andrés. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan meeshan waa inaad iibsato mid ka mid ah kareemada Talyaaniga ee macaan si aad ugu fariisato jaranjarada qorraxda. Halkan waxaan ku arki karnaa Dhismaha Dhismaha ee San Andrés oo leh Madxafka Diocesan ee Amalfi.
Positano waa magaalada kale ee soo jiidashada badan in aan ku arki karno xeebtaan. Ku dhex mushaaxidda jidadkeeda cidhiidhiga ah ee soo jiidashada leh ayaa ka mid ah qorshayaasha ugu fiican ee aan qaban karno. Waa inaad sidoo kale aragtaa Kaniisadda Santa María de la Asunción, oo ah dhismaheeda ugu muhiimsan ee diimeed ee ku taal sawirka asalka Byzantine ee yimid magaaladan qiyaastii qarnigii XNUMXaad. Positano sidoo kale waxaa ku yaal dhowr xeebood oo aad ugu raaxeysan karto cimilada wanaagsan, sida Spiaggia Grande ama Fornillo.
Capri wuxuu kaloo ku sugan yahay Xeebta Amalfi laakiin waxay u qalantaa qayb kala duwanaansho maxaa yeelay meeshani waxay ahayd tobanaan sano dalxiiska xagaaga ee heer sare ee dadka caanka ah. Maanta waa goob kale oo dalxiis oo leh meelo aad u xiiso badan sida Blue Grotto, oo ah god leh marin laga soo galo hal mitir oo dherer ah oo doon lagu booqan karo oo leh biyo aad u buluug ah oo umuuqda wax aan macquul aheyn. Waxaan kor ugu kici karnaa Monte Solaro oo ah kursi si aan ugu raaxeysanno aragtida ugufiican ee Capri oo aan ugu dhex soconno xarunta taariikhiga ah, halkaas oo aan ku arki doonno Piazza Umberto I, Clock Tower ama Kaniisada San Stefano.
La Jasiiradda Sardinia waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan badda Mediterraneaneo. La Maddalena waa aag jasiirado ah oo leh jasiirado yaryar oo aad ka heli karto xeebo ciid wanaagsan iyo biyo cadcad. Meeshan waxa aan ka qaban karno waa ku raaxeysiga muuqaalka dhulka, dusha sare ama jiifka xeebta. Laakiin Sardinia sidoo kale waxaa ku yaal tuulooyin qurux badan oo la booqdo, sida Castelsardo, oo ah tuulo midabo badan leh oo ku taal dhagaxa weyn ee badda fiiriya iyo qalcad da ka weyn kun sano. Waa inaanan ilaawin xeebta quruxda badan ee La Pelosa ee ku taal Stintino. Waa xeeb caan ah oo leh jawi dabiici ah iyo mid paradisiacal ah oo ku guuleysta qof kasta oo leh biyaheeda buluugga ah. Sidoo kale waa inaad waqti qaadataa si aad u aragto Grotta di Nettuno, oo ah god dabiici ah oo ku yaal Cabo Caccia.
Sicily waa jasiirad kale oo cajiib ah oo mudan in horay loo sii booqdo. Dhexdeeda waad ka heli kartaa ku raaxayso magaalada Palermo, taas oo lagu arko cathedralkeeda, suuqyada ama Qasriga Norman. Jasiiradda waxaa sidoo kale ku yaal goobo qadiim ah sida Dooxada Macbadka. Waa inaad aragtaa Scala dei Turchi, mid ka mid ah meelaha ugu cajaa'ibka badan dhamaan Sicily, oo arag magaalada Ragusa. Meel u dhow Marzamemi waxaan ku leenahay keydka dabeecadda Vendicari, oo ah aag la ilaaliyo oo aad ku arki karto shimbiro kala duwan. Waxaad sidoo kale booqan kartaa Etna oo aad arki kartaa meelaha sida Taormina ama Catania.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Maxaa lagu arkaa xeebta Talyaaniga
Badda Ioniyaanka iyo jasiiradeeda